Ezinaụlọ ngwa Manufacturers & Suppliers - China Ngwa ụlọ Factory
Ọ bụ nnukwu mpaghara na-ejide anwụnta site na ikuku anwụ na-ackingụ anwụnta. Enweghị mmerụ ahụ mmadụ mgbe ọ na-egbu anwụnta. Anion ọcha. Ike site na micro USB ma na-agbanye ọkụ ma ọ dị mfe iwepụ n'èzí.
Uwe a na-ejide uwe na-eji akwa mmiri na-eji akwa steamer 1000W kwụ ọtọ & kwụ ọtọ, 45s na-ekpo ọkụ ọkụ, na-akpaghị aka, 90ml nnukwu ikike mmiri, maka ụlọ na njem.
Obere na obere uwe ụgbọ mmiri nwere efere seramiiki, ihe dị elu nke PC. 2 na 1 akọrọ & mgbochi mmiri ụzọ abụọ. Push-button amalite maka ịdị mma onye ọrụ. 110ml nnukwu ikike mmiri tank, nwere ike ịbụ ironing maka 8-10 nkeji.
Ọla ultrasonic Cleaner na pụrụ iche ọdịdị imewe, ezigbo aka dị nnọọ ka nwa akpụkpọ.
Otu bọtịnụ ọrụ dị mfe, nkeji oge mgbochi akpaaka. 12V obere voltaji ájá-àmà & waterproof ọkwa IP54, mma na durable.Super obere mkpọtụ imewe, mkpọtụ larịị erughị 60dB. Obere obere, adaba ibu, ma enwere ike iji ya dị ka igbe ọla. Tinye maka iko, ọla, elekere, agụba, eze na ihe ndị ọzọ.
4-in-1 multifunctional cordless eletriki mop na sọrọ spinning pad na-ewetara gị ahụmịhe ọhụụ maka mopping / waksị / imecha ala. Ikuku, dị mfe maka ibugharị na batrị Lithium 3200mAh na-ebugharị ya, usoro na-adịte aka. Ọkachamara ihe nrụpụta nke ala na polisher: ya na nnukwu mmiri tankị 300ml ma ọ bụ ihe ọrụ wax. Mbughari na akwa Nano mop isi. Ọ dị mma ihicha ntụpọ dị iche iche. Na ọkụ ọkụ iji nyere aka na-enwu gbaa ebe gbara ọchịchịrị mgbe ọ dị mkpa.
Multifunction cordless n'ala washer na agụụ Cleaner bụ otutu Cleaner jikọtara atụmatụ gụnyere: Wet ịsa na akọrọ agụụ n'otu oge; Nhicha onwe na nhichapụ dabere na arụmọrụ; Mmiri dị ọcha na tankị mmiri ruru unyi kewara; Ike mmiri na mmiri na mmiri na-asacha mmiri; Cordless e mere na kemwepu batrị mkpọ; 17-30 min na-agba ọsọ oge na usoro Standard / Max; Ikanam ihuenyo anya na-arụ ọrụ ọnọdụ; UVC oriọna wuru n'ime maka nje na ikuku igbu egbu; Olu na-echetara na-arụ ọrụ, na-atọkwu ụtọ ka a chọpụta ya.